Blue Spring Ride ( 2014 ) - Myanmar Asian TV
English Title – Blue Spring Ride
အခုတစ်လော Completed Series တွေ Encode ချင် စိတ်မရှိသေးလို့ J Movie လေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ….
ဒီကားလေးကိုတော့ 2014 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီး manga ကို ပြန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ japanese school romance အမျိုးအစား movie လေးဖြစ်ပါတယ် …
ယိုရှိအိုက ဖုတဘဟာ အလယ်တန်းကျောင်းသူဘဝမှာ တနခ ကိုးဆိုတဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ ကျောင်းသားလေးကို သဘောကျခဲ့တယ် … သူတို့ နီးစပ်တော့မယ့်အချိန်မှာပဲ တနခ ကိုးက ကျောင်းပြောင်းသွားလို့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ် … အထက်တန်းကျောင်းရောက်တဲ့အခါ ဖုတဘ က ကိုးနဲ့ ပြန်တွေ့ခဲ့ပေမယ့် …. တနခ ကိုးအဖြစ်နဲ့မဟုတ်ပဲ မဘုချိ ကိုးအဖြစ်နာမည်ပြောင်းထားပြီး အလယ်တန်းတုန်းကနဲ့ မတူပဲ ပြောင်းလဲသွားတယ် ….
အလယ်တန်းတုန်းကရော ဘယ်ကို ဘာလို့ပြောင်းသွားတာလဲ ?
သူကရော ဖုတဘ ကို သဘောကျနေသေးလား ?
ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးပဲ အဖြေရှာလိုက်ပါနော် ….
ဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသားကားလေးဖြစ်တာကြောင့် ကျောင်းပြီးသွားတဲ့သူတွေ ကြည့်ရင်လည်း … ကျောင်းသားဘဝ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ခဲ့တာတွေ … သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးတွေနဲ့ ကူညီပေးခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြီး သတိတရဖြစ်လာစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်ရှုပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ….
Translator : Nwehnin Thet
Actors: Izumi Fujimoto, Masahiro Higashide, Mitsuki Takahata, Ryo Yoshizawa, Tsubasa Honda, Yu Koyanagi, Yua Shinkawa
Openload.co Myanmar 733 MB Download Soliddrive.co Myanmar 733 MB Download
Trailer: Blue Spring Ride ( 2014 )